तातोपानी नाका पुनःनिर्माणका लागि चिनियाँ सहयोग, अब सुचारू होला त ? - Everest Dainik - News from Nepal
तातोपानी नाका पुनःनिर्माणका लागि चिनियाँ सहयोग, अब सुचारू होला त ?
काठमाडौं, चैत १ । चीनसँग जोडिएको तातोपानी भन्सार नाकाको पुनःनिर्माणका लागि चीनले गर्ने सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य ९ करोड
याे पनि पढ्नुस चीनको चेतावनी: चीन–पाकिस्तान सैन्य अभ्यासबारे अफबाह नफैलाउ
ट्याग्स: China, Nepal, tatopani naka